Van Dijk oo ka hadlay khaladaadkii ay sameeyeen kulankii Salzburg ee tartanka Champions League – Gool FM
Van Dijk oo ka hadlay khaladaadkii ay sameeyeen kulankii Salzburg ee tartanka Champions League
(Liverpool) 04 Oct 2019. Daafaca reer Holland ee Virgil van Dijk ayaa aaminsan inay wanaagsan tahay in la aqbalo tirada goolashii ka dhashay kooxda Liverpool kulankii ugu dambeeyay ay kula ciyaareen naadiga Salzburg tartanka Champions League.
Liverpool ayaa ku hormartay 3 gool qeybta hore ee dheesha, laakiin waxaa ku yimid hoos u dhac ku dhawaad saacad kaddib ciyaarta, taasoo u sahashay kooxda martida aheyd ee Salzburg in dheesha ay ka dhigto barbaro 3-3 ah, kahor inta uusan goolka 4-aad dhalinin Maxamed Saalax.
Virgil van Dijk ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu yiri:
“Maskaxdeena waxay ku xiran tahay inaan sii wadno shaqada wax kastoo dhaca, haddii ay goolal naga dhashaan ama aan dhalino, waxaan had iyo jeer sii wadaynaa wixii aan u baranay, waxaana ku sii socon doonaa wadadeena”.
“Waxaa naga dhashay 3 gool oo garoonkeena ah, taasna xaqiiqdii ma aysan fiicneyn, laakiin waxaa laga yaabaa inay fiican tahay inaan ogaano inay tahay inaan horumar sameyno waxaan isku dayi doonaa inaan taas sameysano, sidaas darteed ma jiraan wax laga walwalo”.
“Ugu dambeyntii, taasi waxay la micno tahay inaan ku fiicnaano xilliyada qaar kulamada soo socda, waana inaan falanqeeynaa wixii dhacay, waxaan rajeyneynaa inaan soo bandhigno waxa ugu fiican kulanka Leicester City”.
Fernando Santos oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee xiddigaha xulka Portugal ee ka qeyb galaya kulamada Luxembourg iyo Ukraine… (Miyuu ku jiraa Ronaldo?)